Itoobiya waxay shaacisay guusha wejiga labaad ee buuxinta biyo xidheenkeeda - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Itoobiya waxay shaacisay guusha wejiga labaad ee buuxinta biyo xidheenkeeda
Itoobiya waxay shaacisay guusha wejiga labaad ee buuxinta biyo xidheenkeeda
Warbaahinta Itoobiya ayaa shaacisay maanta oo Isniin ah dhameystirka wajiga labaad ee buuxinta “ Biyo-xidheenka “Renaissance Dam” ee ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Buluuga Niilka.
Wakaaladda Warbaahinta Itoobiya ayaa sheegtay in marxaladda buuxinta labaad ee biyo xireenka lagu dhammayn doono daqiiqado gudahood, ka dib marka heerka biyaha Nile ay gaaraan meel la mid ah marinka dhexe ee biyo xidheenka.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay wuxuu qabtay kulan looga hadlayo dhibaatada Biyo-xireenka, ee u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan, laakiin illaa iyo hadda ma uusan soo saarin go’aan ama talo-bixin ka dib fadhigiisii.
Kal-fadhigan ayaa yimi ka dib markii ay Itoobiya si rasmi ah ugu wargalisay Masar iyo Suudaan inay bilaabayaan buuxinta labaad ee biyo xidheenka , taas oo ay labada dal u arkeen inay itoobiya ku tumatay shuruucda caalamiga ah, iyo in ay ku tumatay heshiiskii 2015.
Si kastaba ha noqotee, Ra’iisel Wasaaraha Suudaan, Abdullah Hamdok, wuxuu tixgeliyey in aysan ahayn talaabada Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay mid macnaheedu yahay in laga tanaasulayo doorka Afrika, balse taa bedelkeeda waxaa loo arkaa talaabooyinka caalamiga ah kuwo xal keeni kara.
Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa sheegay in “amniga Masar uu yahay khad cas,” isaga oo carabka ku adkeeyay in dalkiisu haysto “awoodo siyaasadeed iyo kuwo militari oo awood u siinaya inay ilaaliso danaheeda ayna ku fulin karto rabitaankeeda,” isagoo ula jeeda dhibaatada ka dhalan karta biyo-xidheenkaa Itoobiya.
Itoobiya waxay billowday inay dhisto dhismaha biyo xireenka sanadkii 2011, iyadoo ujeedkeedu ahaa inay dhaliso koronto; In kasta oo la saxeexay Bayaan Mabaadi’da ah, oo qeexaya sida ay saddexda waddan uga go’an tahay inay heshiis ka gaadhaan buuxinta iyo ka shaqaysiinta biyo-xidheenka, iyadoo loo marayo wadahadal, misna wada-xaajoodyadii kuma guuleysan in wax heshiis ah lagaadho.
Masar waxay ka cabsi qabtaa saameynta biyo xireenkuuu ku yeelan karo qeybteeda ay biyaha ka hesho, oo u dhiganta 55.5 bilyan oo mitir kuyuub sanadkii, sidaa oo kale Khartuum waxay walaac ka qabtaa saameynta biyo xireenka Itoobiya uu ku leeyahay howlgalka biyo xireenka Suudaan.
Al-Mayadeen.Net Isha-warka: wakaaladaha, Af-celita: Xassan M. Dhiillood
Previous articleEthiopia announces the success of the second phase of filling the Renaissance Dam
Next articleXisbiga Jubilee dhismo ahaan wuu dhintay, William Ruto xulufadiisa ayaa hadda shaaciyay